साबधान !! "यो मायाको सागर" फेसबुक आइडी एसेप्ट नगर्नुस - Lekhapadhi मुख्य समाचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी ११ श्रावण २०७८, सोमबार २३:५३ मा प्रकाशित
खोटाङ- पछिल्लो समय खोटाङमा नक्कली फेसबुक आइडीबाट युवतीको मानमर्दन हुने गरेको पाइएको छ। ‘यो मायाको सागर’ नामक नक्कली फेसबुक आइडीबाट आएको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एसेप्ट गर्दा जिल्लाको विभिन्न गाउँका १२ भन्दा बढी युवतीको मानमर्दन भएको पाइएको हो।
खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ बाम्राङकी २१ वर्षकी युवतीलाई ‘यो मायाको सागर’ नामक फेसबुक आइडीबाट फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो।
रिक्वेस्ट आएको फ्रेन्डलिस्टमा आफ्नै गाउँका दिदीबहिनी देखेपछि उनले पनि चिनजानकै मान्छे ठानेर एसेप्ट गरिन्। तर, त्यही अपरिचितको फ्रेन्डरिक्वेस्ट एसेप्टले गर्दा दाहाल थरकी युवतीलाई नसोचेको तनाव झेल्नुपरेको छ।
पटक–पटक आफ्नै तस्बिर राखेर अपशव्द प्रयोग गरेर ‘सेक्स्सुअल’ स्टाटस लेखेर टाइमलाइनमा राखिदिने र ट्याग गरिदिन थालेपछि उनलाई तनाव भएको हो। अहिले गाउँघरमा हिँडडुल गर्नै अप्ठ्यारो हुनेगरी आक्रमण हुन थालेको उनी बताउँछिन्।
यसैगरी, सोही ठाउँकी अर्का १९ वर्षीय र २१ वर्षीय युवती पनि ‘यो मायाको सागर’ नामक फेसबुक आइडीबाट पीडित छन्। ‘यो मायाको सागर’ नामको फेसबुक आइडीबाट तिनै युवतीको तस्बिर राखेर व्यक्तिगत मान, सम्मान र इज्जतमा दाग लाग्ने खालका शव्द प्रयोग गरेर आफन्तलाई ट्याग गरिदिने गरेका छन्।
युवतीको टाइमलाइनमा राखिएका र ट्याग गरिएका सामग्री आफन्तसँग सँगै बसेर पढ्न सकिन्न। यति मात्र कहाँ हो र ? ‘यो मायाको सागर’ नामक फेसबुक आइडीले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–११ राजापानी, रावाबेँसी गाउँपालिका–१ कुभिन्डेदेखि काभ्रेसम्मका दर्जनौँ युवती पीडित भएको गुनासो प्रहरीमा आएको छ।
यस्ता किसिमको अश्लील स्टाटसले समाजमा मुख देखाउनै असहज बनाएको पीडित युवतीको गुनासो छ। किशोरीहरूलाई फ्रेन्ड लिस्ट खोज्ने, रिक्वेस्ट पठाउने र त्यहीँबाट तस्बिर तानेर आइडीमा पोस्ट गर्ने गरेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक अमरप्रसाद गजमेरले बताए।
पटकपटक अश्लील पोस्ट गर्दा परिवारमा समेत तनाव सिर्जना भएको छ। नक्कली फेसबुक एकाउन्ट बनाएर युवतीको मानमर्दन गर्ने र सामाजिक रूपमा बेइज्जत गर्ने व्यक्तिको हालसम्म पहिचान भने भइनसकेको प्रहरीले जनाएको छ।
‘हाम्रो इज्जत र प्रतिष्ठामा प्रश्न चिह्न उठेको छ। घरपरिवार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोणसमेत नकारात्मक बनेको छ। व्यक्तिगत जीवन व्यतित गर्नै समस्या बनाएको छ,’ एक पीडित युवतीले भनिन्, ‘अब लजाएर चुप बसेर भएन। चुप लागेर बसिरह्यौं भने समाजले उल्टै हामीलाई नै नराम्रो ठान्ने रहेछ। थोरैले हामी निर्दोष छौँ भनेर बुझेका छन्, बुझ्छन्। तर, धेरैले त हामीलाई नै दोषी भनिरहेका छन्। हामी यसबाट उन्मुक्ति खोजिरहेका छौँ।’
नक्कली फेसबुक आइडीबाट मानमर्दन गर्ने व्यक्तिको पहिचान एवं कारवाहीका लागि पीडित चार युवतीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङमा असार १२ गते र १९ गते निवेदन दिएका छन्।
यस्तै, असार १३ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरो भोटाहिटी काठमाडौँमा पनि निवेदन दिएको उनीहरूले बताए। तर, हालसम्म दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन।
फेसबुकपीडित युवतीले दिएको उजुरीबारे अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक उमेश लम्सालले बताए।
‘यो टेक्निकल कुरा भएकाले साइबर ब्युरोसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको छ। त्यो मान्छे बसेर चलाइरहेको स्थान पत्ता लागिसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो मान्छे विदेशमा भएकाले को हो भन्ने पत्ता लगाउन गाह्रो भइरहेको छ। त्यसको पहिचान गर्न इन्टरपोलमार्फत प्रयास गरिरहेका छौँ।’
पीडित युवतीले नक्कली फेसबुक आइडीबाट आफ्नै तस्बिर राखेर अश्लील स्टाटस लेखेको कुरा असार ११ गते मात्र थाहा पाएको बताइन्।
‘यो मायाको सागर’ नामक फेसबुक आइडीबाट ‘पहिलो र दोस्रो भाग सकियो अब तेस्रो भाग आउँछ’ भनेर स्टाटस लेखेको पीडित युवती बताउँछन्। मेसेन्जरमा समेत अश्लील शब्द प्रयोग गरेर संवाद गर्ने गरेको पाइएको छ।
यद्यपि, प्रहरीसम्म उजुरी पुगेपछि सो आइडी सञ्चालकले क्रमशः सबैलाई फ्रेन्डलिस्टबाट हटाउँदै लगेको बताइएको छ। एक युवतीको तस्बिरलाई प्रोफाइल पिक्चर बनाएका उनले हाल सोे तस्बिरसमेत हटाएका छन्। रासस